28 Efraim+ asabofo abotiri akɛse no nnue. N’anuonyam fɛfɛ no te sɛ nhwiren bi a ɛretwintwam a wɔde ahyɛ kurow a ɛda asase pa no atifi no. Ɛhɔ na wɔn a nsã afa wɔn nnommum no te! 2 Hwɛ, Yehowa wɔ ɔhoɔdenfo bi a n’ani so yɛ hyew.+ Na obetu ato fam ahoɔden so te sɛ aprannaa kɛse mu amparuwbo,+ gyampantrudu mframa a ɛsɛe ade, te sɛ nsu a eyiri+ sram so kitikiti sɛ aprannaa dennen. 3 Wobetiatia+ Efraim asabofo abotiri akɛse no so. 4 Na n’anuonyam fɛfɛ a ɛte sɛ nhwiren a ɛretwintwam+ a wɔde ahyɛ kurow a ɛda asase pa no atifi no bɛyɛ sɛ borɔdɔma a edi kan+ ba ansa na ahohuru bere adu no; sɛ obi hu wɔ ne nsam ara pɛ a ɔbɛmene. 5 Saa da no asafo Yehowa bɛyɛ sɛ anuonyam abotiri+ ne nhwiren kyɛw fɛfɛ+ ama ne manfo a wɔaka,+ 6 na ɔbɛyɛ atɛntrenee honhom ama nea watena ase rebu atɛn,+ ne ɔkatakyi ama wɔn a wɔdan ɔko ani fi kurow pon ano.+ 7 Eyinom nso, nsã ama wɔafom kwan, mmosã ama wɔde wɔn ti pempem. Ɔsɔfo ne odiyifo+ nso, mmosã ama wɔafom kwan, nsã ama wɔn adwene atu afra, mmosã ama wɔde wɔn ti pempem.+ Wɔafom kwan wɔ adehu mu, na wohinhim wɔ gyinaesi mu. 8 Ɛfe pɔtɔɔ ayɛ apon so mã+​—baabiara nni hɔ a ebi nni. 9 Hena na obi bɛkyerɛ no nimdeɛ,+ na hena na obi bɛkyerɛ no nea wate no ase?+ Wɔn a wɔatwa wɔn nufu, wɔn a wɔatew wɔn afi nufusu ho anaa?+ 10 Na ɛyɛ “mmara-mmara, mmara-mmara; susuhama-susuhama, susuhama-susuhama; ɛha kakra, ɛhɔ kakra.”+ 11 Ano a ɛpo dodow+ ne tɛkrɛma foforo+ so na ɔnam bɛkasa akyerɛ ɔman yi.+ 12 Wɔn na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Ahomegyebea ni. Momma wɔn a wɔabrɛ no nhome. Ahotɔbea ni,” nanso wɔampɛ sɛ wotie.+ 13 Na wobebu Yehowa asɛm sɛ “mmara-mmara, mmara-mmara; susuhama-susuhama, susuhama-susuhama;+ ɛha kakra, ɛhɔ kakra,” na wobebu ahwe wɔn akyi, wobebubu, na wɔbɛtɔ afiri mu ma ayi wɔn.+ 14 Muntie Yehowa asɛm, mo a mohoahoa mo ho, mo a mudi ɔman yi so+ wɔ Yerusalem: 15 Na moaka sɛ: “Yɛne Owu ayɛ apam,+ na yɛne Adamoa* anya anisoadehu+ biako; sɛ nea eyiri fa so no retwam a, ɛremma yɛn so, efisɛ yɛde atoro ayɛ yɛn guankɔbea,+ na yɛde nkontompo ayɛ yɛn hintabea.”+ 16 Enti nea Awurade Tumfoɔ, asafo Yehowa, aka ni: “Mede ɔbo+ ato fapem asi Sion,+ ɔbo a wɔasɔ ahwɛ,+ twea bo+ a ne bo yɛ den a wɔde ato fapem+ denneennen. Na obiara a ɔwɔ mu gyidi no remmɔ hu.+ 17 Mede atɛntrenee bɛyɛ susuhama+ na mede trenee+ ayɛ prumo, na amparuwbo+ bɛpra atoro+ guankɔbea no na nsu ayiri afa hintabea+ no. 18 Apam a mo ne Owu yɛe no begu,+ na anisoadehu a mo ne Adamoa nyae no rennyina.+ Sɛ nea eyiri sram so no retwam+ a, ebetwiw afa mo so.+ 19 Bere biara a ebetwam no ɛbɛfa mo akɔ,+ na anɔpa biara ne awia ne anadwo, ebetwam. Na wɔn a wɔbɛte na wɔate ase no ho bɛpopo.”+ 20 Mpa no yɛ tiaa enti obi ntumi ntwe ne nan mu, na mmuatam no nso sua enti entumi nkata ne ho nyinaa. 21 Yehowa bɛsɔre agyina sɛnea ɔyɛe wɔ Bepɔw Perasim+ so no, na ɔbɛwosow ne ho sɛnea ɔyɛe wɔ Gibeon+ asasetaw so no. Ɔbɛyɛ anwonwade bi, na obedi dwuma soronko bi.+ 22 Enti munnni fɛw+ bio na mo ahama no mu anyɛ den, efisɛ mate sɛ Awurade Tumfoɔ,+ asafo Yehowa, asi gyinae sɛ ɔbɛsɛe asase no nyinaa pasaa.+ 23 Monyɛ aso ntie me; monyɛ komm ntie m’anom asɛm. 24 So okuafo fɛtɛw asase daa+ sɛ obedua ade? Ofuntum asase+ siesie so daa? 25 Sɛ osiesie asase no ani wie a, so ongu kumin tuntum, na ɔmpete sare so onunum+ wɔ so? So onnua awi ne atoko+ wɔ n’afã,+ ne kɔkɔte*+ wɔ ne hye so?+ 26 Ɔteɛ+ no so ɔkwampa so. Ne Nyankopɔn kyerɛkyerɛ no.+ 27 Ɛnyɛ awiporow ade+ na wɔde porow kumin tuntum; na wɔmfa teaseɛnam nan mfa onunum so. Mmom abaa+ na wɔde boro kumin tuntum, na poma na wɔde boro onunum. 28 So wɔyam awi ma ɛyɛ muhumuhu? Ma wɔmporow+ no daa.+ Obi bɛma ne teaseɛnam ne n’apɔnkɔ afa so, nanso ɔrenyam.+ 29 Eyi nso fi asafo Yehowa ankasa hɔ,+ nea n’agyinatu yɛ nwonwa na ne nnwuma da ne nyansa adi no.+